စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ - 50% ဦးဝင်း£မှ 50 အထိ Daily သတင်းစာနယူးဂိမ်း Boost |
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – 50% ဦးဝင်း£မှ 50 အထိ Daily သတင်းစာနယူးဂိမ်း Boost
ဒီဆုကြေးငွေ 2nd အကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် – 8ဖေဖေါ်ဝါရီလကြိမ်မြောက် 2017 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -9.30hrs, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8နာရီ
အမြတ်နှင့်အရှုံးသာ (: P&L ကို) ရှေးခယျြထား slot ကဂိမ်းအပေါ်, က Superman, အဆိုပါ Batman, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အကြား Green Lantern 00:00 & 23:59 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) ထိုမြှင့်တင်ရေး၏နေ့၌ Boost ဘို့အရည်အချင်းများဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ Boost အသားတင်အမြတ်အညီချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည် (စစ်မှန်သောပိုက်ဆံအနိုင်ရရှိ) ရှေးခယျြထား slot နှစ်ခုအပေါ်. ကြောင်းကိုသင်၏ပိုက်ကွန်ကို P ကို​​ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်&L ကိုအနိုင်ရရှိအတွက်€ 10 နိမ့်ဆုံးရရှိခဲ့သည်, သငျသညျမှာတွက်ချက်တစ်ဦးထပ်တိုးဦးမည် 50% သင့်ရဲ့အသားတင် P ကို၏&L ကို.
အဝင်းက Boost များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, ကစားသမားမြှင့်တင်ရေး၏နေ့၌€ 10 နိမ့်ဆုံးသိုက် လုပ်. က Superman အပေါ် wagered ရ, အဆိုပါ Batman, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်နှင့် The Green Lantern.
ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
ယေဘုယျ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်ထား.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – 50% ဦးဝင်း£ 100 အထိတက် Boost
20% ဦးဝင်း£ 200 အထိနေ့စဉ် Cleo Plus အားဆောင်ပုဒ် Boost
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – Losses back week all…